लेख Archives · sankhuwasavaonline
बीबीसी । श्रीमानसँग योभन्दा पहिला पनि झुटो बोलेकी थिएँ । त्योबेला त्यसको नाफा घाटा बुझ्थेँ । यस पटक अँध्यारो कुवामा हामफाल्दै छु भन्ने लागेको थियो । त्यो समयमा विषय अर्कै थियो । मैले आफ्नो श्रीमानलाई मेरो तलब कम भनेकी थिएँ । किनभने केही पैसा जम्मा गर्न सकूँ र उसलाई रक्सीमा पैसा खर्च गर्नबाट रोक्न सकौँ । यो झुट थाह पाए भने कति मार खाने छु भन्ने थाह थियो । आँखा सुनिने छन्, ...
काठमाडौं। २०४४ चैत २९ गते प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका झापा चन्द्रगढीका लक्ष्मण न्यौपानेलार्इ टीकापुर घटनामा विभत्स हत्या गरेको २९ महिना वित्नै लाग्दा सोही दिन नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका दाङका प्रकाश अर्याल नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनेको १० महिना पूरा भइसकेको छ। नेपाल प्रहरीका अन्य अधिकारीहरुलार्इ चुस्त सेवाका लागि प्रोत्साहन गर्नुथियो भने सोही समय वा त्यसकै भ...
-शुभेच्छा बिन्दु तुलाधर हालैको कुरा हो, काठमाडौँकै एकजना बहिनी गुर्जुकोमा चिना देखाउन गएकी थिइन् । गुर्जुले उनलाई भने— ग्रहदशामा गडबडी चलिरहेको छ, कुलदेवता पूजा गर्नू ठीक हुन्छ । समस्याको निदान पाएर बहिनी खुसी भएर त फर्किइन् । तर कुलदेवता पूजाको तयारी गर्दागर्दै उनलाई अर्को समस्या आइपर्‍यो, कुलदेवता पूजा गर्ने त हो, तर कुन चाहिँ कुलदेवता ? आफूले जन्मैदेखि श्रद्धापूर्वक पु...
काठमाण्डौ। चुनाव सकिएपछि धेरै साथीहरूले मलाई काठमाडौँ जान दबाब दिइरहेका थिए । ‘नेताहरूलाई भनसुन गर् चलखेल थुप्रै हुन्छ रे’ भन्दै । त्यसलाई थेग्न नसकी मैले सदरमुकाम छोडे पुस ४ गते । साथीहरूलाई काठमाडौँ हिँडे भनेर लिबाङ छोडेकी म काठमाडौँ होइन सिधै गाउँतिर हान्निएँ । फुर्सदिलो समयमा गाउँमा गएर भेटघाट गर्ने उद्धेश्यका साथ । गाउँमै रहेका बेला यही पुस ७ गते बेलुकी ९ बजेर ४० मिनेटम...
वामदेव गौतम - प्राचीन इतिहास काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा पहिले स्थायी बसोबास गर्ने मानव समुदाय गोपालवंशी(यादव) गण थियो । नेपालमा राज्य उत्पत्तिको प्राचीन इतिहास पनि यहीँदेखि सुरु भएको मानिन्छ । त्यसपछि यस उपत्यकामा करिब एक हजार वर्ष किरात जातिको गण राज्य रह्यो । किरातपछि लिच्छविहरूले नेपालमा करिब सात सय वर्ष शासन गरे । त्यसपछि मल्लहरूले करिव नौ सय वर्ष र शाह वंशीय राजाहरूले...
श्रद्धेय अध्यक्ष ज्यु , अभिवादन !! तपाई अहिले आफ्नो जन्मभुमि चितवनमा प्राप्त भएकाे जितकाे खुसि एकातिर र एकमात्र पुत्र प्रकाशकाे बियाेगकाे पिडा अर्कोतिर । यि चिजलाई फ्युजन गरेर दृढताका साथ अघि बढन सक्नु तपाई भित्रकाे छुट्टै विशेषता हाे । क .प्रकाशकाे निधनमा मैले भाैतिक उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गर्न त पाईननै तर यस जेलकाे चार दिवार भित्र बसेर मनमनै श्रद्दासुमन अर्पन गर...
नेपालको पुर्वी धरानवाट करिव ४ घण्टाको सवारी यात्रा पछि संखुवासभाको मुख्य नाकामा पर्ने पर्यटकीय मुढे वजार पर्यटकीय रुपमा निकै चर्चाको शिखरमा छ । संखुवासभाको पुर्वी दक्षिणी भेगमा अवस्थित प्रमुख नाकाको रुपमा परीचित मुढे शनिश्चरे वजार प्राकृतिक रुपमा अत्यन्तै मनोरम र सुन्दर रुपमा परीचित छ । छिन छिनमा परीवर्तन भइरहने मौसम , फराकिलो भुभागमा रहेका नागा डाडा काडा , अरुण नदीवाट वहने ...
श्रीमान विदेशमा भएकी छिमेकी आन्टीसँगको त्यो रात…. सत्य नेपाली यौनकथा
दुई छोराकी आमा भर्खर जुँगाको रेखी बसेको तन्नेरीसँग चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्। यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ ? देहसुख अर्थात् सेक्समात्र हो तरु श्रीमान् विदेशमा हुने, श्रीमान्को माया नपाउने, असन्तुष्ट र कुण्ठित महिलाहरूले यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएको छ। उता तन्नेरीहरूका आफ्नै कथा छन्। उनीहरू ‘आन्टी’हरूसँग फस्नुका कारण अनेक छन्। कसै...
प्राय हरेक ज़सो मांछे धर्म गर्न मन्दिर जाने गर्दछन वा घर मैं भए पनी सानो तीनो मन्दिर राखेर पूंजा गर्ने गर्दछन । अनि आफ़ू र आफ़नाको कुसल मंगल र प्रगतिको कामना गर्दछन । अझ मुक्तिनाथ गोसाई-कुण् लगायत तिनिहरू नपुगेको कुण्ड हुदैन । तर तिनै मांछे जब आ-आफ्नो काम र पेसामा जांछन, तब कमिसन ठगी र भ्रष्टाचार आदि अनेक खाले अपराध गर्ने गर्दछन, वा भनौ जानी नजानि पाप गर्दछन । रबी लामिछनेले सीध...
पुरुषसँगको त्यो मेरो पहिलो रात !
मयमनसिंहमा प्राइभेट कोठा नपाइए पनि ढाकामा पाइन्छ भनेर रुद्र भनिरहन्थ्यो। तर, म कसरी ढाका जान सक्थेँ र ! रेलमा चढेर एक्लै जान त सक्थेँ होला, तर घरबाट अनुमति देलान् र ! अन्त्यमा सान्दाइ मयमनसिंह आएका वेला ढाका जान जिद्दी गरे । ‘पहिलो वर्षको जाँच पास गरेको प्रमाणपत्र लिन ढाका जान्छु,’ भनेँ। ढाका पुग्नेबित्तिकै ‘एकजना साथीलाई ढाका विश्वविद्यालयको होस्टेलमा भेट्न जान्छु’ भन्दै सान्द...